INSIZWA yaKwaNyuswa eNtshonalanga yeTheku uMnuz Sibusiso Nzama ozalelwe endaweni yaKwaNyuswa uthi uyazifela ngomculo nokusiza umphakathi.
UMnuz Nzama oqale imfundo yakhe emabangeni aphansi esikoleni esaziwa ngokuthi yi-St Lawrence Primary School, waphothula umatikuletsheni eSiyajabula High School.
Uthe: “Emva kokuba ngiphothule umatikuletsheni ngidlulele eLangeni College ngenza izifundo ze-Civil Engineering ngabe sengi dlulela e-Damelin lapho ngithole khona isitifiketi sezifundo zika gesi. Ngiphinde ngathola isitifiketi se-Community Building ngo-2016 ngaphansi kwe-Democracy Development Programme.
Emva kokuba ngiqede ukufunda ngisebenze e-Training Centre ngo-2011 ngasungula iqembu laba dansi elibizwa ngokuthi yi-Training Centre, lapho bengi sebenzisana noNsunda benoSbongiseni owaziwa ngelika ‘Cyto’.
“Leli qembu liqophe i-album ngo-2013 enesihloko esithi Dalmede edayise ubuthaphuthaphu futhi ebikhangisa nabanye abaculi abahlukene kuyo.
Sinandise ezindaweni ezehlukene kubalwa e-City Hall eThekwini, eGoli elokishini lase Soweto, eMlazi, eClermont nakwezinye izindawo. Ngo-2015 ngibe yingxenye yenhlangano ebizwa ngokuthi yi-
Right2know okuyinhlangano elwela amalungelo abantu. Ukusebenzela le hlangano kube enye yezindlela zokuzikhandla ekusebenzeleni umphakathi engisuka kuwo,” kusho uMnuz Nzama.
UMnuz Nzama uqokwe ukuba amele isifundazwe saKwaZulu-Natal ngaphansi kwenhlangano i-Right2Know kwi-National Summit ebise Kapa.
Uthe: “Ngesikhathi ngise Kapa ngifunde okuningi futhi ukuba ngaphansi kwale nhlangano kungenze ngabona izindawo eziningi kubalwa eKapa, eGoli, eShowe nase-Eastern Cape.
Kuningi okunye engingakubala engikwenze ngo-2016 njengo sebenzisana nezinhlangano ezimbili i-Children Have a Dream ne-Love Life lapho besihlela imicimbi emikhulu sifundisa abafundi ezikoleni ezahlukahlukene emphakathini ngempilo, ukuziphatha komuntu omusha, ukuzivikela kwisandulela ngculazi, ukuqwashisa intsha ngezidakamizwa ezingekho emthethweni nokunye okuningi.
Ngisebenzisane nenhlangano ebizwa ngokuthi yi-Rieco Bird Media ibambisene ne-Right2Know ekuhleleni umcimbi ngosuku lwentsha ngo-June 16.
Lo mcimbi wawuhanjelwe ngezinye zezi nhlangano zaluleka intsha ngokuziphatha nokubaluleka kwemfundo,” kusho yena.
UMnuz Nzama usebenzisane noMnuz Zama Zuma owaziwa ngelika ‘Feleba SK’ ngaphansi kwe-Rieco Bird Media ekuthuthukiseni amakhono entsheni yaKwaNyuswa, Pinetown nase Thekwini namaphethelo.
“Sihlele imicimbi eminingi lapho simeme intsha ukuba izokhangisa ngamathalente ayo kubalwa ukusina, ukudansa imidanso ehlukene, umculo nokunye.
Siphinde sibe nama-workshop lapho sifundisana ngama lungelo nokubaluleka kwemfundo. Konke engikwenzayo ngikwenza ngothando nokuzimisela futhi ngisebenza ngokuzikhandla ekuthuthukiseni intsha nokusebenzisana nomphakathi.”
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngoSbusiso Nzama noma iRieco Bird Media shayela inombolo ethi: 073 911 9912 noma uvakashele ikhasi le-Facecook elithi: Rieco Bird media Online.